Anyị niile Dị Iche | Martech Zone
Anyị niile Dị Iche
Ozugbo m hụrụ na ọ bụ naanị obere akwụkwọ ka Anyị niile Dị Iche apụ maka ire ere, amaara m na m ga-ịtụ otu. Nke a bụ akwụkwọ Seth Godin kachasị ọhụrụ ma ọ bụ obere ngosipụta dị egwu.
Site na aka uwe: arụmụka nke Godin bụ na nhọrọ ịkwanye anyị niile n'akụkụ ụwa nkịtị naanị iji nyere aka na-ere ihe ndị ọzọ na-adịghị mma na ezighi ezi. Ohere nke oge anyị bụ ịkwado dị egwu, na-ere ndị dị egwu na, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịghọ ndị dị egwu.
Ihe osise bu ihe osise a nke gosiputara ihe Seth Godin kowara. Mbịakọ ọnụ gburugburu ụwa, nkesa na-adịghị ọnụ, na nwekwu nkwukọrịta emeela ka anyị niile bụrụ ndị iju dị ka anyị n'ezie dị. Ọ dịghị mkpa ka anyị bụrụ ndị nkịtị - anyị nwere ike ịchọta ndị nwere mmasi, ihe omume ntụrụndụ na uto dị ka anyị n'akụkụ niile nke ụwa.
Dịka ọ metụtara ahịa ahịa nke oge a, ozi nke akwụkwọ a dị oke mkpa n'echiche m. Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-eji igwe na-elekọta mmadụ dị ka dị nnọọ ọwa ọzọ. Ọ bụ nkwupụta m na-anụ oge niile ma ọ dị njọ. Ọ bụ naanị dị nnọọ ọwa ọzọ mgbe ịchọrọ ịla oge gị n'iyi na-ere otu ụzọ site na ya. Ezubere iche si abụghị usoro kachasị mma na mgbasa ozi.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ihe onwunwe na ohere iji nye ha weird na ebe ichikota, keta oke ma kwurita okwu. Char-Broil si ndi mmadu abughi ire ihe ndi ozo, o bu ichikota ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu na-acho ihe ndi ozo. Ozugbo obodo ahụ na-eme nke ọma, ha na-enwe ekele maka ụdị ahụ nyere ha ohere yana, n'ikpeazụ, ahịa ahụ ga-eso.
Ebe ụlọ ọrụ gị na-emepe maka ihe dị ịtụnanya ịhazi adịghị mkpa na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Otherlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọmarịcha ọrụ na-akwalite nnọkọ mmekọrịta gburugburu obodo, ọrụ ebere, ihe omume ma ọ bụ ụfọdụ ebumnuche ndị ọzọ.
Agencylọ ọrụ anyị na-etinye nnukwu ego na blọọgụ a, usoro vidio anyị, ihe ngosi redio anyị, ma na-akwado mpaghara na mba ndị na-elekwasị anya ndị dị iche iche dị ka anyị na dị ka leverage technology maka ahịa. Anyị bụ ndị iju… anyị ga-ekwu okwu koodu, API, ngwa beta, nchịkọta na akpaaka karịa isiokwu ahịa ndị ọzọ. Anyị anaghị ekwu ọtụtụ ihe gbasara akụkọ Facebook, Google+ ma ọ bụ Twitter… isiokwu ndị ahụ bụ nkịtị ma ị nwere ike ịchọta narị blọọgụ narị na-alụ ọgụ maka okporo ụzọ ahụ!
Anyị ga-arapara n'ahụ egwu.
Lee ezigbo akwụkwọ. Enwere m mmasị n'akwụkwọ ndị na-akọwapụta ihe anyị na-eme ma na-akpali anyị ịrụsi ọrụ ike na ya. Dị ka Seth si kwuo, Ebumnuche bụ ịchọta na ịhazi ma jikwaa ma duru otu agbụrụ nke ndị mmadụ, na-anabata ọdịdị ha, ọ bụghị ịlụ ọgụ. Enwere m olileanya na anyị ga-aga n'ihu ime nke ahụ!
Iji gaa n'ihu na-akwalite mkparịta ụka a, biko sonye na peeji nke Mgbakọ ma denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị (nke dị n'elu). Kwesighi ịpụ Indianapolis n'agbanyeghị na a na-eziga mpaghara mpaghara ahụ ebe ahụ. Anyị ga-amalite inwe ụfọdụ webinars na mebere ihe adịghị anya - ikekwe nke mbụ, dị ka Ọrụ Domino na-arịọ, bụ ịkọrọ na-atụle akwụkwọ a!
7 Ihe mmuta Muta na Promkwalite odide Gị
CSS3 Nkuku, Gradients, Onyunyo na ndị ọzọ…
Sep 26, 2011 na 7:49 PM
Ọ na-ada m ọtụtụ ihe dịka ihe Dan Kennedy na-ekwu maka ya na vidiyo ya n’oge na-adịbeghị anya. Ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa / ndị nwe ụlọ ahịa akwụsị ịnwa ịdị ka ndị ọzọ ma na-elekwasị anya na njirimara ha pụrụ iche na ịkekọrịta akụkọ na echiche ha pụrụ iche, mgbe ahụ ha ga-ahụ ka akara ha n'ezie na-apụta na-akpaghị aka na n'ụzọ nkịtị. Akwụkwọ a na Dan yiri ka ha kwadoro nke a. Achọrọ m ijide otu akwụkwọ Seth!
Sep 26, 2011 na 8:10 PM
Scott, aga m elele Dan Kennedy mgbe ahụ! Ọ ga-amasị m ịhụ ụfọdụ na omimi na mkparịta ụka na isiokwu ahụ.